Chii chatingatarisira kubva pakuratidzwa kweiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Tangori maawa makumi maviri nemana kubva pachiitiko chekuratidzwa kweiyo nyowani iPhone 24. Apple yakaronga yayo yakasarudzika yechiitiko chaSeptember mairi iyo yaanobvisa ma software ayo matsva, inotiratidza chigadzirwa chayo, iyo iPhone 7 uye 7 Plus, uye zvakare ine zvimwe zvinotishamisa. Gore rino chiitiko chekuratidzira chinouyawo pakati peasati amboitika mamiriro ayo MacBook neMac renji isina kuvandudzwa kwenguva yakareba, uye neApple Watch yatove neinopfuura gore pamusika. Pane zvakawanda zvinotarisirwa zvinogadzirwa mumwedzi yese yerunyerekupe, asi chii chatinogona kutarisira kubva muchiitiko ichi chekuratidzira mangwana munaGunyana 7? Isu takagadzirira pfupiso yezvose zvakaburitswa panguva ino.
1 iPhone 7 uye 7 Plus
1.1 Kuchinja kudiki kunze
1.2 Kuchinja kukuru kune zvemukati
2 Iyo itsva, yakazvimiririra Apple Watch
3 Nyowani software: iOS 10, macOS Sierra, watchOS 3, tvOS 10
4 Chii chitsva paMac makomputa
iPhone 7 uye 7 Plus
Kuchinja kudiki kunze
Ndicho chete chinhu chatinogona kuvimbisa 100%: pachave nePhones nyowani. Gore rino iyo iPhone 7 uye 7 Plus inoonekwa sechinhu chinoshanduka, chakamirira Apple kuvhura gore rinouya, panopembererwa gore regumi regumi reiyo iPhone, chigadzirwa chinoputsa zvechokwadi. Iyo iPhone 7 ichave neyekunze dhizaini yakada kufanana neazvino iPhone 6s, nemusiyano wekuti mitsetse yakatwasuka yakayambuka iro rese rekuvhara iyo iPhone ichanyangarika, ichiwana yakachena back.
Kunze isu tichaona zvakare yakakura kamera mune 4,7-inch modhi, iine kuvandudzwa senge inogona kugoneka Optical stabilizer, uye mbiri kamera mune 7-inch 5,5 Plus modhi, iyo yaizobatsira kuvandudza mifananidzo yakatorwa nechiedza chidiki uye kuwana mhedzisiro zvirinani kana uchiswededza. Shanduko dzinooneka dzinoenderera mberi nekubviswa kwehephonephone jack, ichiwedzera chechipiri grille iyo inogona kunge isina chero mutauri, asi panzvimbo pezvo ita nzvimbo yeiyo nyowani mota. Chekupedzisira, akati wandei mavara matsva anogona kuoneka, matte nzvimbo nhema, yakasviba pane ino yazvino nzvimbo grey, kuwedzera kune inopenya nhema (kana piyano nhema). Paive zvakare nekutaura panguva yerima bhuruu, asi iyo runyerekupe inoita kunge yakaramba yakadaro.
Kuchinja kukuru kune zvemukati
Kunyangwe vazhinji vachifunga kuti shanduko dzekunze dziri shoma, kunyange hazvo dzimwe dzichikosha, chinhu chakanyanya kukosha chinouya mukati. Iyo inosimbisa ichave nyowani A10 processor, ine anofungidzirwa mabhenji akaparadza makwikwi, kunyangwe iyo-ine simba-rose Galaxy Note 7. Iyo nyowani iPhone 7 ichave inosvika ku35% ine simba kupfuura iyo yazvino iPhone 6s, inova yakawanda zvakare kuziva kugona kweiyo yazvino terminal. Iyo skrini inogona zvakare kuve nekukosha kunatsurudzwa, uye kunyangwe iyo resolution uye saizi zvaizoramba zviripo, zvaizovandudza iyo yayo color gamut, ichizviisa padanho reiyo iPad Pro 9,7 iyo yakawana yakawanda yakawanda yakanaka ongororo. Chekupedzisira, pakave nekutaura kwakawanda pamusoro pebhatani nyowani rekutanga, iro raizosiya izvozvi zvemakaniki "kubaya" kweiyo chaiyo "bhatani", sezvazviri kune yazvino MacBook trackpad. Rinenge riri rimwe bhatani rinotarisana nematanho akasiyana emazinga, saka mashandiro aro anozoenda kupfuura kuvhara mashandisirwo kana kutora zvigunwe zvedu.
Iyo itsva, yakazvimiririra Apple Watch
Yasvika nguva yekuburitsa iyo itsva Apple smartwatch. Iine anopfuura gore pagore pamusika uye pakupedzisira yakanatsiridzwa uye yakagadziridzwa software inotibvumidza kushandisa mafomu eApple Watch, kambani ichaunza iyo itsva Apple Watch 2, kugadzirisa zvimwe zvikanganiso izvo zvazvino modhi. Izvo zvinofungidzirwa kuti iyo nyowani Apple Watch ichave ine dhizaini ingango fanika kune yazvino, kunyangwe nyowani mavara angaonekwa. Zvinoenderana nezvinofungidzirwa kuti zvakaburitswa zvikamu, wachi nyowani yaizove nechidzitiro chakatetepa, icho chingaita nzvimbo yezvinhu zvitsva seGPS nebhatiri hombe..
Iyo GPS ichatibvumidza isu kudzidzira mitambo tisina kumbotakura iyo iPhone nesu, kuchengetedza nzira yedu paawa uye kuiendesa kune iyo iPhone kana tangobatanidzazve kwairi. Izvi zvinopa wachi kuwanda rusununguko, kunyangwe isu tichafanirwa kumirira chimwe chizvarwa kuti chiise kubatana kwayo, nekuti iyo yazvino modhi ichave isati iine SIM, kana yepanyama kana chaiyo. Pamusoro peizvi, chokwadika, pachave nekuvandudzika kukuru mu processor iyo, pamwe neiyo itsva watchOS 3, inozoipa kukurumidza kumhanya kana uchiita mashandisiro. Apple inotarisirwa zvakare kugadzirisa kusagadzikana kwemvura, kuitira kuti wachi iratidze kuita kwechero mutambo wemvura.
Nyowani software: iOS 10, macOS Sierra, watchOS 3, tvOS 10
Yakapihwa muna Chikumi uye muBeta chikamu kusvika zvino, ino ndiyo nguva yekuti Apple ivhure vhezheni yayo nyowani yezvinhu zvese zvinoenderana:
iOS 10, inowirirana ne iPhone 5 uye chero modhi inotevera. Iyo nyowani software inounza zvakakosha kuvandudzwa senge yakakwenenzverwa zvachose meseji application, ine zvitambi uye mamwe akawanda mabasa matsva, mukana wechitatu-bato kunyorera kushandisa Siri, uye chitsva "Kumba" kunyorera kudzora HomeKit-inoenderana zvishandiso.
watchOS 3 inounza maficha matsva, doko nyowani yekuwana iwo maapplication aunoshandisa nekukurumidza uye zvakananga, uye yakakura system optimization iyo inoita yemuno kunyorera kuvhura nekukurumidza zvakanyanya.
MacOS Sierra 10.12, anotsiva OS X, inozopedzisira yaunza Siri kumakomputa eApple, application nyowani yeMifananidzo yakafanana neiyo yeIOS, kugona kuvhura komputa yako neApple Watch uye kushandisa Apple Pay muSafari.
tvSO 10 iyo inowedzera nyowani yerima modhiyo kune software interface yeApple TV, imwe nyowani yakasarudzika yekutendera iyo inokutendera iwe kuti usvike akasiyana maapplication uchishandisa imwechete account, uye nyowani interface yeApple Music.
Apple haifanire kuburitsa software nezuva rimwechete nechiitiko, asi ichangogumira pakuburitsa yazvino maBetas kana Golden Master shanduro., zuva rimwe chetero, kuvhura vhezheni dzekupedzisira vhiki rinotevera. Zvinotarisirwa zvakare kuti ese ari maviri iOS 10 uye watchOS 3 inounza zvimwe zvitsva kusvika parizvino zvakavanzwa izvo zvakasarudzika zvemidziyo mitsva iyo yavanopa kwatiri.
Chii chitsva paMac makomputa
Pasina kugadziridzwa kukuru kweinopfuura gore, kunze kweMacBook nyowani yakatangwa muhafu yekutanga yegore rino, zvinotarisirwa kuti Apple ichazivisa shanduko dzakakosha dzinokanganisa makomputa ayo, ese mabhuku emabhuku uye akagadziriswa. Kunyangwe paine kutaura nezve chinogona kuitika chakazvimirira chiitiko muna Gumiguru, kune vazhinji vanofunga kuti zviitiko zviviri mune pfupi nguva ipfungwa yekuziva AppleSaka zvinogona kunge kuti iwe unoita chiziviso pachiitiko ichi usinga nyatso kunyura mumakomputa ako matsva.
Kuvandudzwa kwakanyanya kunotarisirwa ndekwe MacBook Pro, ine dhizaini dhizaini uye saizi diki, kunyangwe isina kusvika pakunyanyisa kweMacBook yazvino. Shanduko dzakakosha mumaprosesa uye makadhi emifananidzo, uye kunyanya OLED yekubata skrini iyo ingaite sekhibhodi pamusoro payo uye iyo inobvumidza mabhatani akasiyana kuti apiwe zvichienderana nechishandiso chatiri kushandisa. Ehezve ivo vanosanganisira iwo matsva USB-C zvinongedzo (zvinopfuura imwe mune ino kesi) uye keyboard yakafanana neazvino MacBook.
Iko shanduko dzaizopedzwa neMacBook Air nyowani yaizosanganisira iyo USB-C zvinongedzo asi pasina hukuru hwekushandura shanduko, Inomhanyisa, ine simba iMacs uye nyowani 5K yekutarisa iyo inogona kunge iri kubva ku LG uye kuti yaizotsiva yekare Thunderbolt Ratidza iyo yakanyangarika mwedzi yapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Chii chatingatarisira kubva pakuratidzwa kweiyo iPhone 7
Yakanaka sarudzo yekudzokorora neA9 processor kubva gore rapfuura.
Yakagadziriswa kare. Tsika ... ndine hurombo 😉
Iyo iPhone 7 ichave isina mvura here? Ndakashamisika kuti havana kuzviisa: $
Iyo iPhone 7 yaigona kurekodha 4K vhidhiyo kaviri iyo FPS yeiyo 6s